mercredi, 07 novembre 2018 14:06
Fianarantsoa: Milamina ny fizotry ny fandatsaham-bato
Saika nisokatra tamin'ny 6 ora maraina avokoa ny biraom-pifidianana miisa 159 eto an-toerana. Mavitrika vao maraina ny mpifidy raha ny hita teny amin'ny birao-pifidianana nolalovana, saingy nisafidy ny hanefa izany adidy izany any amin'ny misandratr'andro kosa ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny tantsaha. Somary mangina ny tanàna amin'ny ankapobeny ary tazana mivezivezy ireo mpanaramaso ny fifidianana avy any ivelany.
Kisary matetika miseho tamin'ny birao nanangonana vaovao ny ahiahy momba ny antsapaka izay nahafahana nametraka ireo olona roa manao sonia ambadiky ny biletà tokana. Misy amin'izy ireny no naverina natao ka najanona tsy nampiasaina intsony mihitsy ny fehezana bileta tokana 2 izay nosoniavin'ny solontenan'ny birao-pifidianana araky ny toromarika mba ialàna amin'ny disadisam-pifidianana.
mercredi, 07 novembre 2018 10:32
Madagasikara: Fifidianana filoham-pirenena
Tanterahina amin'ity alarobia 7 novambra 2018 ity, manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fifidianana filoham-pirenena.
Mpifidy 10 tapitrisa eo no antsoina hanefa ny adidiny amin'izany.
Nisokatra tamin'ny 6ora maraina ireo biraom-pifidianana miisa 24.852 ary hikatona amin'ny 5ora hariva.
Miisa 36 ireo kandida mifaninana.
mercredi, 07 novembre 2018 07:04
Élection présidentielle à Madagascar: Déclaration du Chargé d’Affaires Américain Stuart Wilson
"En ce jour du premier tour de l’élection présidentielle à Madagascar, nous félicitons le peuple Malagasy lors de ce moment très important dans la vie du pays pour leur respect d’un processus démocratique paisible. Les Etats-Unis continuent d’encourager un processus électoral crédible, juste, transparent, et inclusif.
Aujourd’hui, en complément de notre contribution au fond de soutien pour le cycle électoral SACEM, nous nous tiendrons encore une fois aux côtés du peuple Malagasy en déployant nos observateurs à travers le pays.
Moi-même, je visiterai plusieurs bureaux de vote avec mes collègues de la Mission Américaine. J’encourage ainsi les électeurs à venir nombreux aux urnes pour accomplir leurs devoirs de citoyens et je souhaite bonne chance à tous les candidats".
mercredi, 07 novembre 2018 06:33
Fifidianana: Misokatra ny biraom-pandatsahambato
Nisokatra nanomboka tamin'ny 6ora maraina ny biraom-pandatsahambato rehetra manerana ny Nosy, hifidianana izay ho Filoham-pirinena hiasa ao anaitin'ny 5 taona.